Jos Stelling - umqondisi-Dutch: Biography, Filmography
Jos Stelling - umqondisi, screenwriter, umkhiqizi ababevela eNetherlands. Umphakathi wonke umhlaba owawaziwa kwamafilimu yakhe "Ukufa kanye Ntombazane" nesithi "Illusionist." Wazini wena mayelana cinema-Dutch? Northern Europe, ke uye wazakhela ubuhlobo bayo ekhethekile ebhayisikobho. amafilimu European abafani nanoma yiziphi Russian noma Hollywood izithombe. Abaqondisi aseNyakatho Yurophu esivela nesitayela sabo esiyingqayizivele.
Jos Stelling - the filmmaker Dutch wabo bonke abahlala khona. Indlela yakhe e-movie akubukeki njenge yimiphi ezaziwayo. Ngo-2007, Russian sikhipha ifilimu "Darling" nge Sergeem Makovetskim Starring. Mina lo ifilimu Jos Stelling.
Biography: iminyaka Early
Wazalelwa umqondisi esizayo Julayi 16, 1945 emzini Utrecht eNetherlands. Abazali bakhe abantu abavamile kakhulu, uyise wayengumuntu wombhaki oqeqeshiwe. Jos, njengazo zonke izingane, ukuya esikoleni, edlala nezinye abafana egcekeni. Ngesinye isikhathi, lapho lo mfana owayeneminyaka engu, eyayilicoshe emgwaqweni 35 mm ifilimu. Le filimu kwaba matted ngamanzi yaphela indaba yalo. Jos igcinwe akutholile ebhokisini futhi bafika itshe lome inhlama. Ngezinye izikhathi, lapho othile unesithakazelo okuqukethwe ebhokisini, waqala ukuqamba kanye Baxoxa ngezinto, ngokusho kwakhe, wawugcinwa ebhokisini.
Esikoleni, lapho afundela khona umqondisi esizayo, ngeSonto yabonisa amafilimu by odumile amakhosi movie Italy. Nge ifilimu omusha ngamunye, umfana zonke uthanda ebhayisikobho. Ngemva kwalokho, kwaba isikole Italian wefilimu uyoba nethonya elikhulu umsebenzi Stelling.
Ngemva kwesikole, Jos wanquma ukufunda kusuka umqondisi. ENetherlands ngaleso sikhathi-ke sasingakabatholi izikhungo ukunikela abantu bangayithola imfundo enjalo. The guy asihlali akukho abangakwenza ngaphandle kokuhlala ukufunda umlando kanye eziyisisekelo zokubala emkhakheni we cinema kuphela.
I amafilimu lokuqala
Lapho le ndoda ithola izinto eziyisisekelo namabhayisikobho, wanquma ukuthi kukho konke kwaba ukususa ifilimu yakhe. Wayefanele iskripthi nokulangazelela okukhulu, kodwa babengenayo imali kanye nempahla. Njengoba kumdlali umqondisi ifilimu imfundamakhwela abangane bakhe. Ngakho isici ifilimu wokuqala wadutshulwa Jos "Mariko kusukela Nijmegen." Le filimu wakhululwa ngo iqashwe ngo-1974. Ibhokisi isithombe kwabasiza futhi yabakhanga ababukeli. Izimo zethu zihluke kakhulu kungalindelekile yonke indalo Stelling ezinyantisayo futhi uhlelo main lomkhosi ifilimu e Cannes.
Eshukunyiswa impumelelo njengoSihlalo womkhandlu osanda kwenziwa filmmaker Dutch wathatha ifilimu olandelayo. ifilimu "Elkerlik" yakhululwa ngo-1975. Wabuye inkanyezi isabelomali ongaphakeme futhi abadlali non-professional. Ngalesi sikhathi umphakathi uye wasabela isithombe kunalokho ongaphakeme, naphezu elikhulu emva le Cannes Film Festival igama umqondisi sika - Jos Stelling.
Ama-Movie ukuthi kukhona eminye kude wayalwa, base bekhona kakade nge budget eningi futhi abadlali professional. Ngo-1977, izikrini aphume isithombe "Rembrandt. Portrait 1669". Le filimu ngokuphila umdwebi odumile Wamukelwa ngemfudumalo abagxeki ngisho izindondo eziningi.
Ngo-1983, sikhipha ifilimu "I Illusionist" Jos Stelling. Lesi sithombe wenza nomqondisi owaziwayo emhlabeni wonke ngenxa Singularity yayo. Esikhathini ifilimu, cishe kungekho khona inkulumo. amagugu eziningi ezinikezwa emkhathini lapho isenzo main kwenzeka. Jos ezikhethwe ngokucophelela imibala kanye nomculo eyayizosetshenziswa esigcawini ngasinye, ngenxa efika into elithakazelisayo ngempela. Amasu ngokusebenzisana umculo umbala umqondisi "I Illusionist" uzobe ngenkuthalo esetshenziswa emisebenzini yakhe okwalandela.
Jos itshela ababukeli bakhe ukuthi inkhulumomphendvulwano akulungile kakhulu amabhayisikobho. Cinema, ngokombono wakhe, lisondele ngefomu umculo kuka ngetemibhalo. Izingxoxo bazalwa engqondweni, ngokuvamile kuhlaziywe futhi ucabangé. Stelling ancamela ukuthatha okuthile womuntu ozalelwe enhliziyweni, hhayi ubuchopho, imizwa, hhayi isizathu. Jos ukholelwa ukuthi omunye wabaqondisi kufanele sinake kakhudlwana nemizwa ukudwetshwa yakhe, kulandela umculo zenhliziyo.
"I Illusionist" Le filimu yawina umklomelo ngesikhathi Netherlands Film Festival "Ithole Legolide" kusigaba "Kuhle Film". Abagxeki futhi bathande entsha ekudalweni wizadi.
Ngezinye isiqongo yakhe,
Esivelele master okwamanje cabanga amafilimu ukuthi wathatha Stelling ngokushesha ngemuva "I Illusionist." Lesi yisithombe "switchman", olwanyatheliswa ngo-1986, futhi isithombe "The Flying umDashi", eyanyatheliswa ngo-1995. Lezi imisebenzi emibili, ngokuvumelana ehola ifilimu a baxgeki, kufakwe amafilimu engamakhulu engcono yomlando cinema.
"Switchman" utshela izilaleli zonke emlandweni womuntu, osebenzela i-switchman ujantshi. Uhlala ukuphila kwakhe wedwa, kuze eduze komuzi wakhe ayibonakali umgibeli ehlangeni. Yena esezinzile switchman futhi uphendulela izwe lakhe esiphendula esibhekisa phansi. "Switchman" European ifilimu a baxgeki umxhwele kangangokuba hhayi kuphela uthole iningi wokubuyekezwa okuvumelekile emaphephandabeni, kodwa futhi abafanelwe ukuphathwa olukhethekile-Venice Film Festival.
Umdwebo "The Flying umDashi" akafani lonke umsebenzi Jos, it is zihlukaniswa isikali walo omkhulu. Kunezindlela eziningi izinhlamvu, eziningi mpendulwano. Le filimu isethwe ngekhulu le-16, ngesikhathi iNkantolo Yamacala Ezihlubuki. I Flying umDashi e ifilimu - akuyona umkhumbi, kodwa indoda. Le filimu ikhombisa indaba uhambo lwakhe, indaba bazinqoba kanjani izithiyo futhi vicissitudes yomlando ukuze afinyelele umgomo wakhe. Isihluthulelo isihloko ifilimu - isizungu. Jos Stelling, lapho kuxoxwa naye ngokuvamile uthi kususa hhayi amabhayisikobho ezahlukene, kanye ifilimu efanayo kukho konke ukuphila kwami. Isihloko umsebenzi wakhe - kuyinto isizungu.
"I Flying umDashi" waqokelwa "Golden Lion" ka-Venice Film Festival kodwa akazange athole umvuzo.
Le filimu "Cha izitimela, akukho izindiza," eyakhishwa ngo-iqashwe ngo-1999. Izethameli kahle ezitholwe isithombe umqondisi-Dutch. Abagxeki wachaza le ncwadi ngokuthi "comedy of the okungenangqondo" ngenxa izinhlamvu elibi, ezinemibala egqamile in the ifremu nomculo ekhethekile.
Ngo-2007, izikrini out ifilimu "Darling". Lena isithombe co-ukukhiqizwa Belgium, Russia, Netherlands nase-Ukraine. Esikhathini amazwe CIS kahle kakhulu wahlangana nalona ifilimu hhayi kuphela ngenxa emangalisayo ukuqondisa Jos, kodwa futhi nomdlali abanamakhono ukudlala Sergeya Makovetskogo abenza ifilimu indima abaholayo. Isethi izithombe abadlali abaningi Russian futhi Ukraine babe nesifiso sokuthandana.
Abagxeki baye kwesokunxele, "Dushku" zingagadiwe. Le filimu uqokelwe izindondo eziningi ehlonishwayo, kuhlanganise umklomelo we-European Film Academy.
Ngo-2012, i-Russia naseNetherlands nokubambisana emkhakheni ukukhiqizwa ifilimu baqhubeka. Ezikrinini out ifilimu entsha Jos Stelling "Ukufa kanye Ntombazane." "Bow izincwadi Russian" ngokuthi kamuva ukuthi umsebenzi wakhe umqondisi Jos Stelling.
"Ukufa kanye Ntombazane" namuhla - isithombe lokugcina wayeyisazi-Dutch. Mayelana ifilimu elisha kuze kube uthi Stelling. Ngubani umqondisi befilimu - kungaphumeleli, kodwa kunalokho wokuzilibazisa noma njengoba esho yena ngale ndaba: ". Cinema - yalo iyipharadesi"
UDavid Attenborough: Filmography, biography kanye nempilo yakho
"Wonderland": abalingisi, amaqiniso athakazelisayo mayelana nokudutshulwa ifilimu
The best uchungechunge Spanish
Indlela ukuqeda woodlice endlini kuze kube phakade?
Abadlali Russian - "Umlisa iwindi"